Weerar lagu qaaday goob ah ka socotay Diiwaan-gelinta Doorashada Somaliland – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Wararka Caawa aan ka heleyno Magaalada Laascaanood ee Xarunta Gobolka Sool ayaa waxaa ay sheegayaan in weerar lagu qaaday goob ku taalla halkaas oo ay ka socotay diiwaan-gelinga Cod-bixiyaasha Doorashada Somaliland.
Weerar loo adeegsaday Bam gacmeed ayaa lagu tuuray goobta ay socotay diiwaan-gelinta doorashada oo sigaar ah ugu taalla meel ku dhow hotelka Ataash ee Laascaanood, waxaana baxday ragii ka dambeeyay falkaas.
Dadka deegaanka qaarkood oo la hadlay warbaahinta ayaa u sheegay in dhawaqa gambada la maqlay, kadibna ay xigtay rasaas badan oo ay fureen Ciidamo ka tirsan kuwa Maamulka Somaliland oo xiligaas aaga ka agdhawaa.
Wararka ayaa intaas kusii daraya in weerarka ay ku dhaawacmeen laba Askari iyo qof shacab ah, waxaana haatan degan xaaladda, iyadoo Ciidanka Maamulka ay la wareegeen gacan ku heysta goobtii la weeraray.
Ciidanka Booliska Somaliland ayaa Caawa lagu soo warramayaa in Magaalada Laascaanood ee Xarunta Gobolka Sool ka wadaan howlgal kala duwan oo lagu raadinayo dadkii ka dambeeyay weerarkii halkaas ka dhacay.
Illaa iyo hadda ma jiro wax war ah oo kasoo baxay Maamulka Somaliland oo ay uga hadlayaan weerarkii ka dhacay Laascaanood, waxaana maalmihii lasoo dhaafay Magaalada ka socotay diiwaan-gelinta Cod-bixiyaasha doorashada Somaliland.